Njengoba sekunama-computer iqala isigaba esisha intuthuko kwezesayensi nakwezobuchwepheshe. Manje computer iyithuluzi elinamandla ukuthi, okokuqala nje, zokuhlanganisa ulwazi, futhi okwesibili, ngesivinini futhi kusiza ekusebenziseni kwazo futhi, Okwesithathu, ijubane ulwazi olusha. Ikhompyutha kwavusa cishe yonke imikhakha ngesayensi nobuchwepheshe ukudlulisa ukuba sifinyelele inani elihle bona ulimi sekulingisa ikhompyutha. Ngakho, kanye eyala zakudala lapho wezibalo yezamakhompyutha, eseyi, njll ..
Modern Ihluzo computer kuyinto ezindaweni eziningana futhi ezihlukahlukene izicelo. Eqinisweni, abanye isisekelo iwukuba ukushintsha lobuchwepheshe imibhalo imidwebo, abanye - inkinga ka tekusebenta womuntu-computer ukuxhumana, zezinombolo processing imisebenzi, emagama kanye ne-transmission izithombe, kanye ukudalwa ashukumisayo, virtual, multimedia Computing ezindaweni kanye onobuhle ngakuthathu okuqinile.
Phakathi Emashumini amabili eminyaka edlule kwenziwe usesho okunzulu izindlela ukuqeda igebe esenzelwa phakathi ukukhiqiza kuqhathaniswa eliphezulu ngokuzenzakalela ukukhiqizwa inqubo, kwamakhamera ocingo ongaphakeme throughput ibhukwana noma ngomshini inqubo design kanye nokulungiselela ukukhiqizwa ubuchwepheshe.
Ngo izincwadi ezikhona itulo cabanga algorithm kutsi bakwati kutakhela Korobov Curves. Uhlaziyo kuholela iziphetho ezilandelayo: 1) izincwadi ezihlukahlukene lemali kuyahlukahluka sibonile ezibonelweni ezingenhla, 2) alimchazi ukwakhiwa zonke Curves Korobovs aqukethe ezinemininingwane algorithm 3) nencazelo sokuqhafaza algorithm static.
Ukudalwa ukwesekwa electronic methodical inkambo computer ubunjiniyela umdvwebo, okuhloswe ngalo ekuthuthukiseni amakhono abafundi 'eyisisekelo ihluzo zobunjiniyela.
ukuhlaziywa echazwa ekutadisheni inkinga esekelwe cwaningo nezincwadi zesayensi futhi bahlele idatha.
Namuhla, esinye sezithunywa iziqondiso jikelele informatization yemfundo ukwakha izinsiza-kufundisa ngamakhasimende-computer, injongo okuyinto ukuqinisekisa yokulungiswa okuhleliwe kanye sesimanje ingxenye impahla yezikhungo zemfundo medium olukhona, isingeniso e inqubo yemfundo amathuluzi yokufunda yesimanje, elihambisana ezingeni emhlabeni yentuthuko engokwesayensi neyezobuchwepheshe emphakathini, avumele ukusetshenziswa izindlela zakamuva befundisa futhi odala imibandela ukuqaliswa izinqubo eziphumelelayo njll ekufezeni ukufeza izinhloso zezemfundo.
Le nhloso ibangelwa enifeza ubunjiniyela kweluhlaka methodological, ukukhiqiza, sesimanje nokuhlolwa yokulinga entsha amathuluzi yokufunda kanye nokusetshenziswa kwazo inqubo yemfundo.
Ezinye izingxenye imishini, imishini, amathuluzi ukuze kusebenziswe metal izifunda kuthiwa igudle imigqa avaliwe agobile yakhiwa lwesikhathi oyisiyingi esingamakhilomitha diameters ezahlukene, nekhululekile ehambisanayo. Kulezi Curves ngokuthi Korobova zihlanganisa ovals, ovoids, curls, njll ..
izincwadi Modern [chaza algorithm ukuxazulula izinkinga ekwakheni Korobov Curves kanye imidwebo elikulesi sihloko. Isici computer yikhono ngeso lengqondo algorithm ukubulawa inqubo isinyathelo.
Sikhanyisiwe zokundisa ukunikeza ithuba lokubonisa algorithm ekhuphukayo kutsi bakwati kutakhela Korobov Curves e AutoCAD CAD imvelo.
Ngo ukuthuthukiswa zokundisa ziye zasetshenziswa namakhono ukusebenza umhleli Vector kanye raster ihluzo (FotoAngelo 2.0, i-Adobe Photoshop CS2, -Adobe ImageReady CS2) kanye isimiso AutoCAD design abasizwa-computer nezinhlelo endaweni izinhlelo into-ngamakhasimende Delphi 7.
Visual bezibona ulwazi ingcaca kubantu kubalulekile, lemali futhi ulinganisele kukhona bezibona abalulekile ebukwayo. Ukwanda samanje ikhompyutha ikuvumela ukuba ngiziqonde amathuba futhi abonisa ngokucacile umphumela izibalo ezidingekayo ukwakha imidwebo eziyinkimbinkimbi ukumela izici umdwebo noma iyiphi inqubo futhi inikeza zonke izici ukuqeqeshwa - kusukela supply material amasha ukuze basekele umsebenzi esisebenzayo.
Indlela ukuvumelanisa isikhathi kukhompyutha ne-Internet?
Kuyini 25 FPS futhi singayisebenzisa ke ukuze ngehlise umzimba?
Wax e igobolondo - yindlela elula futhi ukonga ngoba depilation
Anapa iholide. "Uhlobo lwembali enephunga elimnandi" (ukuzilibazisa isikhungo): incazelo, intengo Izibuyekezo
Kungenzeka yini ukwenza i-aviary ngenja ngezandla zayo?
Viktor Krum futhi Germiona Greyndzher
Lapho esetshenziswa Gypsum ukwahlukanisa amabhlogo?
Ukuhweba wekhasi ukuhweba iimfesi. Imiraro ukuhweba iimfesi
Ama-headphone EarPods: izithombe, izibuyekezo, Ukucaciswa. Ama-headphone EarPods ukuphathwa. Indlela ukuhlanza, indlela ukuqaqa?